Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịtụ egwu » Viking Cruises: Gịnị bụ ihe ọhụrụ?
Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! • Ịtụ egwu • Ndi akuko
Viking taa kwupụtara ụgbọ mmiri ọhụrụ ya, Viking Saturn®, ga-esonye na ụgbọ mmiri mmeri nke ụlọ ọrụ na mbido 2023.
Viking taa kwupụtara ụgbọ mmiri ọhụrụ ya kacha ọhụrụ, Viking Saturn®, ga-esonye n'ọdụ ụgbọ elu nke na-emeri ihe nrite na mbido 2023. Ụgbọ mmiri nwanne nwanyị 930 ga-anọ oge nwa agbọghọ ka ọ na-akwọ ụgbọ mmiri ọhụrụ atọ na mba Scandinavian na Nordic, gụnyere njem ụbọchị iri na ise, Iconic Iceland, Greenland & Canada, na Iceland na Arctic Explorer nke Norway, na ụbọchị 29 Greenland, Iceland, Norway & Ndị ọzọ njem. Na mgbakwunye na usoro njem atọ ọhụrụ, Viking kwuputara taa na ụlọ ọrụ ahụ ga-eweghachite ụbọchị 8 a ma ama. Ihe mara mma nke Iceland ime njem malitere na Ọgọst 2023.
“Ọtụtụ puku ndị ọbịa ji ụgbọ mmiri anyị Nnọọ Njem njem na Iceland n'oge ọkọchị a nwere ahụmịhe nke ukwuu na ha nyere ọkwa ọkwa, "Torstein Hagen, Onye isi oche Viking kwuru. “Usoro njem ọhụrụ a dị mma maka ndị njem na -achọ ịmata ihe na ụzọ ụzọ ndị nyocha Viking mbụ si aga Iceland na ebe ugwu North Atlantic ndị ọzọ mara maka ịma mma ha. Anyị na -atụ anya nnabata Viking Saturn nye ụgbọ mmiri anyị na inye ndị ọbịa ọbụna ụzọ ndị ọzọ iji nyochaa akụkụ a pụrụ iche nke ụwa na nkasi obi. ”
Ọhụụ na nlọghachi 2023 Nordic Itineraries:
Iconic Iceland, Greenland na Canada (OZI) -Njem njem ụbọchị iri a gụnyere Iceland, Greenland na ógbè Canada nke Newfoundland na Nova Scotia. Ịga ụgbọ mmiri n'etiti New York City na Reykjavik, ndị ọbịa ga -enwe mmasị n'ọdịda ugwu mgbawa nke Westman Islands, kporie ndụ ntụsara ahụ nke ndụ na Djúpivogur, ma gafee n'okporo ụzọ nke obodo ndị mara mma dịka Seydisfjördur na Akureyri.
Iceland na Arctic Explorer nke Norway (OZI) -N'ime njem ụbọchị iri na ise a, ndị ọbịa ga-achọpụta ndụ na mgbago ugwu ka ha na-eme njem n'ofe Arctic Circle na n'akụkụ oke osimiri Norway na Iceland. Mgbe m nwesịrị ọnụnọ abalị Viking SaturnỌdụ ụgbọ mmiri nke Bergen, soro nzọụkwụ Vikings ka ị na -eleta Honningvåg dịpụrụ adịpụ North Cape wee nyochaa Longyearbyen, nke nwere anụ ọhịa bea karịa ndị mmadụ.
Greenland, Iceland, Norway & Ndị ọzọ (OZI) -Ndị ọbịa nwekwara ike họrọ ijikọ usoro njem abụọ ọhụrụ a maka njem njem ụbọchị 29 dị egwu. Site na obodo Bergen mbụ Hanseatic League, ndị ọbịa ga -eso ụzọ Vikings site na mba Scandinavia nke Norway, Iceland na Greenland tupu ha aga Canada wee mechie na New York.
Ihe mara mma nke Iceland- N’ịlaghachi na 2023, njem a na-ewu ewu nke ụbọchị 8 sitere na Reykjavik na-enyocha oke osimiri Iceland. Ịkwọ ụgbọ mmiri na -aga Viking Star®, ndị ọbịa ga -ezute ịma mma eke na -enweghị atụ, ndị na -agba mmiri na -asọ asọ na ala fjord mara mma. Soro nzọụkwụ nke onye nyocha na -enweghị atụ Leif Eriksson, lelee anụ ọhịa mpaghara wee mikpuo onwe gị na okike.
Ụgbọ mmiri n'oké osimiri Viking nwere oke oke ruru tọn 47,800, yana ọnụ ụlọ steeti 465 nwere ike ịnabata ndị ọbịa 930. Ụgbọ mmiri oke osimiri na-emeri Viking gụnyere Viking Star®, Osimiri Viking®,Viking Sky®,Viking Orion®, Viking Jupiter®na Viking Venus®. Viking Mars®naViking Neptune®ga -esonye n'ọdụ ụgbọ mmiri na 2022; Viking Saturn ga -esonye na mbido 2023. Cruise Critic kewara ya dị ka “obere ụgbọ mmiri,” ụgbọ mmiri Viking nwere atụmatụ Scandinavia ọgbara ọhụrụ nwere mmetụ mara mma, oghere dị nso na nlebara anya na nkọwa. Isi ihe gụnyere:
Ụlọ ime ụlọ Veranda niile: Ndị ọbịa nwere ike họrọ site na ngalaba steeti ise, malite na 270 sq. Ft. Veranda Staterooms, ha niile nwere veranda nkeonwe, echiche sara mbara nke ebe njedebe na ihe eji enyere ndụ aka nke gụnyere akwa eze nwere akwa linen dị okomoko, kaboodu ekebere oke mmesapụ aka, nnukwu ihu ihu ihu dị larịị. Igwe onyonyo LCD nwere ihe nkiri na-achọ, Wi-Fi efu na ụlọ ịsa ahụ na-emeri nke nwere nnukwu mmiri, Freyja adịchaghị mma.® ngwaahịa ịsa ahụ na ala kpụ ọkụ n'ọnụ.
Oke Suites: Ụgbọ mmiri ndị ahụ nwere 14 Explorer Suites, nke bụ ọnụ ụlọ ime ụlọ abụọ sitere na 757 ruo 1,163 sq. Ft. N'inwe echiche sara mbara site na veranda nzuzo nke wraparound, yana ọtụtụ ihe oriri na ihe ùgwù nke ụdị ọ bụla nọ n'ụgbọ, Explorer Suites na-enye ebe nsọ kachasị. maka ndị ọbịa.
Nhọrọ Pool Abụọ: Na mgbakwunye na Nnukwu Ọdọ Mmiri nke nwere elu nwere ike ịlaghachi azụ na-enye ohere igwu mmiri n'oge ọ bụla, ụgbọ mmiri ndị ahụ na-egosipụta iko mmiri na-enweghị atụ nke nwere iko na-enwetụ ike n'azụ ụgbọ mmiri, na-enye ndị ọbịa ohere igwu mmiri gburugburu ebe ha na-aga.
Oghere LivNordic: N'ikwekọ na ihe nketa Nordic nke Viking, Spa nke nọ n'ụgbọ ahụ bụ nke ejiri amamihe zuru oke nke Scandinavia chepụta-site n'ọdịbendị narị afọ nke sauna ruo Snow Grotto ebe snowflakes ji nwayọ na-esi n'uko ụlọ arịda.
Ebe ezumike ndị njem na nke Mamsen: Soro ndị enyi kerịta mmanya. Na -eri nri ụtụtụ Norwegian na akwụkwọ akụkọ ihe mere eme mmiri. Ebe ndị na-eme nchọpụta na ebe nri Mamsen bụ oghere echebara echiche nke dị na ụta ụgbọ mmiri ahụ wee kee ya ka ọ na-anọchi anya mmụọ Scandinavia maka izu ike zuru oke na maka iju anya site na windo nwere okpukpu abụọ.
Wintergarden: Ndị ọbịa na -achọ ahụ iru ala ga -ahụ ya na Wintergarden. N'ime oghere a mara mma n'okpuru ihe mkpuchi osisi Scandinavia, ndị ọbịa nwere ike ịbanye na tii tii n'ehihie.
Nhọrọ iri nri: Ụgbọ mmiri Viking na -enye nhọrọ iri nri asatọ, ha niile enweghị ụgwọ ma ọ bụ ego ọ bụla - site na nri dị mma na The Restaurant, nke na -enye nri atọ zuru oke na nhọrọ nri dị iche iche, yana World Café, nke na -egosi ọnụahịa mba na ọpụrụiche mpaghara gụnyere sushi na ụlọ oriri na ọ coldụ seụ mmiri mmiri-iji nweta ahụmịhe iri nri ọzọ na tebụl onye isi nri, nke na-enye menu nri ụtọ nke nwere mmanya na mmanya, yana nke Manfredi, nke nwere pasta ọhụrụ akwadoro na ọkacha mmasị ndị Italy. The Pool Grill bụ ọkachamara na burgers gourmet, ebe tii ehihie na scones dị na Wintergarden. Ọrụ Mamsen na-akwụ ụgwọ ụdị nri ndị Norway, yana ọrụ ime ụlọ awa 24 na-enye ohere ka ndị ọbịa niile rie ọtụtụ nri mbinye aka na nkasi obi nke ụlọ ha. Ọzọkwa, site na ọtụtụ nhọrọ maka oche n'èzí mgbe nri, ụgbọ mmiri Viking na -enye ihe kacha al fresco na -eri nri n'oké osimiri. Na mgbakwunye, tebụl kichin na -ahụ maka nri mpaghara site na ahịa ruo na tebụl.
Ịbawanye ọdịbendị: Ahụmịhe Viking site n'ụgbọ mmiri ruo n'ikpere mmiri ka emebere maka ohere na -enweghị atụ na imezi ọdịbendị. Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme bi na Viking na-enye mmụta mmụta akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị dị elu maka njem ahụ, na-enye nghọta bara oke uru na akụkọ ihe mere eme nke ebe ahụ. Ndị nkuzi ọbịa nke bụ ọkachamara n'ọhịa ha mere ka amata nka na nka, nka, egwu, geopolitics, ụwa eke na ihe ndị ọzọ. Arụ ngosi ebe njedebe na -anọchite anya nka nka kacha mara amara na mpaghara - ma ọ bụ opera Ịtali ma ọ bụ fado Portuguese. Ndị na -agụ egwu oge gboo bi - ndị na -akpọ pianist, ndị na -akpọ ụbọ, ndị na -akụ violin na ndị na -eme mkpọtụ na -eme egwu oge gboo n'ime ụgbọ mmiri ahụ. Na klaasị nri na tebụl kichin, ụlọ akwụkwọ nri nke Viking, lekwasịrị anya na nri mpaghara.
Nordic mkpali: Ọbụnadị nkọwa kacha nta na -enweta mmụọ nsọ ha site na mmụọ nyocha nke Vikings mbụ, na -egosipụta ọdịnala Nordic miri emi. Mkpụrụ osisi ọkụ, mmetụ nke slate na teak, limestone nke Sweden na osisi junipa na -esi ísì ụtọ na -apụta n'akụkụ oghere ọha na spa. Ọdịdị Clinker wuru nke Viking Bar gosipụtara ụdị owuwu nke Viking Longships mbụ. Viking Heritage Center na -enye akụkọ ihe mere eme na onodu site na Viking Age. A na -etinyekwa ihe odide sitere na akụkọ ifo Norse n'ime atụmatụ ahụ, na -enye ndị ọbịa na -achọ ịmata ihe mkpali iji nyochaa ihe nketa Nordic nke Viking.